Ungalihlanganisa kanjani Ifayela le-PST le-Outlook?
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Ungalihlanganisa kanjani Ifayela le-PST le-Outlook?
Ifayela le-Outlook PST lizoba likhulu ngemuva kokusetshenziswa isikhathi esithile. Empeleni kungenzeka ukunciphisa usayizi wayo ngokuwuhlanganisa noma ukuwucindezela. Kunezindlela ezimbili zokwenza lokho:
1. Usebenzisa isici esithi “Compact” ku-Outlook:
Le yindlela esemthethweni yokuhlanganisa ifayela elikhulu le-PST, ngokulandelayo (i-Outlook 2010):
Chofoza Ifayela ithebhu.
Chofoza Amasethingi we-akhawunti, bese uchofoza Amasethingi we-akhawunti.
Use Amafayela wedatha ithebhu, chofoza ifayela ledatha ofuna ukuyihlanganisa, bese uqhafaza Amasethingi.
Chofoza Ihlangene manje.
Ngemuva kwalokho i-Outlook izokwenza start compact ifayela le-PST.
Lezi yizinyathelo ze-Outlook 2010. Kwezinye izinhlobo ze-Outlook, kunemisebenzi efanayo. Umsebenzi osemthethweni we- "Compact" uzosusa izikhala ezisetshenziswa izinto ezisuswe unomphela nezinye izinto ezingasetshenzisiwe. Noma kunjalo, le ndlela ihamba kancane lapho ifayela le-PST likhulu.
2.Compact ifayela le-PST ngesandla:
Empeleni ungazihlanganisela ifayili le-PST ngokwakho, ngokulandelayo:
Dala ifayela elisha le-PST.
Kopisha konke okuqukethwe kufayela lokuqala le-PST kufayela elisha le-PST.
Ngemuva kokusebenza kwamakhophi, ifayela le-PST elisha lizoba yifayela le- kuhlanganisiwe Uhlobo lwefayela le-PST yoqobo, ngoba izinto ezisuswe unomphela nezinye izinto ezingasetshenziswanga ngeke zikopishwe.
Ngokuya ngokuhlolwa kwethu, indlela yesibili ishesha kakhulu kunendlela 1, ikakhulukazi lapho usayizi wefayela le-PST ukhulu. Ngakho-ke sincoma ukuthi usebenzise le ndlela ukuhlanganisa amafayela akho amakhulu we-PST.